Dheeraadka cuntada Cunto & Cunto | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Dheeraadka cuntada Cunto iyo Cunto
Dheeraadka cuntada ayaa taageeraya miisaanka luminta
Faa'iidooyinka alaabta kala duwan
Noocyada cuntada dheeraadka ah ee miisaanka luminaya waa weyn. Dhammaantood waxay ballan-qaadayaan miisaan lumis ah oo aan la dareemin gaajo waqti gaaban. Dhammaan arrimahan iyada oo aan qorshaha cuntada ee dheeraadka ah iyo xitaa jimicsi la'aan. Laakiin maxaa xaqiiqo ah oo muhiim ah oo ku saabsan badeecooyinka lumay miisaanka badan? Qaado ballankaaga ama naftaada isku caddee xataa sida caafimaad daro?
Kuwani waa kuwa ugu caansan wax soo saarka
Das Bixinta cuntada dheeraadka ahyabooha in la soomo iyo waarta miisaan lumis waa ruxruxaa protein riesig.-, loo yaqaan cuntada Formula waa calorie hooseeyo iyo xoojiyey nafaqooyin muhiim ah budada protein.
Superfood iyo dheeraadka cuntada
Detoxifiers biyuhu doonaa jidhka in ay lumiyaan miisaan verlieren.- blockers baruurta, gubidda baruurta ayaa sidoo kale looga hortago dib u warshadaynta ee bixisey cunto Fette.- Kohlehydratblocker joogsada Verdauungsenzym.- looga baahan yahay carbohydrate-qaybsama
Cuncun-qabayaasha cuntada oo yareeya dareenka gaajada leh maaddooyinka sida kaafeyn, guarana ama dabeecadaha duugoobay. aad ayay u caafimaad qabaan.
Alaabooyinkaas oo dhan ayaa la yiraahdaa inay kaa caawiyaan inaad lumiso miisaanka oo aad dareento caafimaad iyo taam ah mudo gaaban.
Badeecad kasta oo ka mid ah alaabooyinka cuntadani waxay ku qoran tahay ciqaabta ugu weyn ee ay alaabadu keento si deg deg ah oo joogto ah oo miisaanka jirka ah. Dhammaantoodna aan lahayn Isbedelka cuntada ama jimicsi degdeg ah.
Qayb ka mid ah waayo-aragnimada wax-qabadku waa iyadoo la socota balanqaadyadan. Si kastaba ha noqotee, miisaanka hoos loo dhigo ee caawinta cuntada dheeraadka ah waa in loo tixgeliyaa si caqligal ah. Sababtoo ah liiska liicinta waa ugu yaraan ilaa inta faa'idooyinka.
Waxyaabaha ugu badan ee waxtarka leh waa cuntooyinka qaacidada, halkaasoo budada borotiinka iyo / ama superfood ay isku qasaan biyo si ay u sameeyaan ruxin. Waxyaabaha khaaska ah waxay si kalsooni leh u awoodaan inay sii wadaan cunto ay ku dhiirigeliso guusha dhaqsaha badan.
Beddelka loogu talagalay dadka jir ahaan caafimaad qaba waa kuwa xakameynaya rabitaanka cuntada ee xakameysa dareenka gaajada. Gaar ahaan markaad ka beddelato cunto diirran oo sarre leh ilaa cunto caafimaad leh, kiniinnadani waxay ku caawinayaan wakhti gaaban. Miisaanka lumitaanka kiiskan wuxuu ka dhalan karaa cuntada la yareeyay ee kaloriinta ee macnaha guud ee cuntada miyirka ah.
In wax-u buuran iyo Kohlehydratblockern waxaa sida ay Stiftung Warentest No cilmiga la caddayn cunto wanaagsan Effekte.Kein ka dhigan tahay iyaga oo aan NachteileKohlehydratblocker noqon kartaa sababta oo ah shuban iyo dhuuso inta aad qaadanaysid blockers baruurta keeni kartaa waxyeelo daran sida saxaarada saxaarada, calool xanuun ama fitamiin.
Isla markaa waxay saameyn ku yeelataa saameynta daawooyinka sida kiniiniga ka hortagga uurka.
Laakiin supplements cuntada leeyihiin in lagu daro yo-yo saamaynta dheeraad ah isticmaalka Nachteile.- muddada dheer ee protein ruxruxaa: dhibaatooyin wareegga dhiigga, calool, khalkhal ku Elektrolythaushalt.- Detoxifiers: Heerarka acid uric xad-dhaaf ah, sonkorta dhiigga hoose, rabitaanka cuntada Kaliummangel.-: khataraha kala duwan ee dadka qaba cudurada wadnaha ama dhiig karka.
Waxaa la caddeeyey in cuntada dheellitirka ah sida xayawaanka borotiinka ama xakamaynta cuntada ay bixiso hagid wanaagsan iyo dhiirigelin muddo wakhti xaddidan. Dhammaan alaabooyinka kale ayaa si fudud looga talin karaa
Miisaanka oo aan gaajo lahayn, oo aan cunto lahayn iyo raaxaysi
Cuntada - Sababtoo ah shay diidaya ayaa ku xanaaqa
Talooyin ku kaydsan dufanka dufanka leh
Diimiinta markaad luminaysid miisaanka | cunin
Cuntada - cabitaanku waa muhiim markaad miisaanka ka lumiso
Cuntada - Cabitaanada Calorie Low Low
Cuntada - si khaas ah lumin miisaanka leh talooyin yaryar
Cunto qudaarta | cuntada
Shaaha ilmaha Nafaqada & Cabitaanka carruurta